न अरुको बिहेमा साडी लगाएर जानसक्छु, न स्कर्ट नै लगाएर-नारायणी देवकोटा - MeroReport
न अरुको बिहेमा साडी लगाएर जानसक्छु, न स्कर्ट नै लगाएर-नारायणी देवकोटा
कास्की जिल्लाको लुम्ले गाविसमा जन्मिएकी नारायणी देवकोटाले आफ्नो किशोरावस्था भने बारा जिल्लामा बिताईन् । राजनितिकर्मी समेत रहेकी उनले एउटा राजनितिक पार्टीको बिद्यार्थी संगठनमा एक दशकसम्म बिभिन्न कमिटीमा रहेर काम समेत गरिन् । भर्खरै उनले विद्यार्थी राजनितिबाट बिदा लिएकी छिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय क्याम्पस किर्तिपुरमा अहिले समाजशास्त्र बिषयमा एमए दोश्रो बर्षमा अध्ययनरत नारायणी ट्विटरमा भर्खरै प्रवेश गरेपनि फेसबुक, लगायत सोसल मिडिया र ब्लगिङमा पनि भने सक्रिय युवामा पर्दछिन । राजनितिका अलावा साहित्य श्रृजनामा समेत उत्तिकै सक्रिय नारायणीले आफुलाई फरक फरक मानिसले फरक फरक रुपमा चिन्ने भएकोले यसैगरी चिनाउँ भन्ने त्यस्तो केही छैन भन्छिन । 'न अरुको बिहेमा साडी लगाएर जान सक्छु न स्कर्ट नै लगाएर' समाजको मध्यमबर्गको आम नेपालीका रुपमा आफूलाई थप चिनाउँदै नारायणी यसो भन्छिन् । सकेसम्म बोल्नुभन्दा पनि अरुको कुरा सुन्न रुचाउने नारायणी यसपाली भने हामीसंग साताका ब्लगर स्तम्भ मार्फत बोल्दैछिन् । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी :
सोसल मिडियामा म आफूलाई एउटा कवि, लेखक र सचेत नागरिकका रुपमा चिनाउन चाहन्छु । एउटा सचेत नागरिकको रुपमा म ब्लगर पनि हुँ ।
तपाँईको यो http://narayaniwave.blogspot.com/ब्लगको नाम DUSTBIN राख्नुभएको रहेछ । यही नाम राख्नुको केहि विशेष कारण पनि छ कि?
मेरो ब्लग DUSTBINमात्रै हो । म सकेसम्म मेरा लेखहरु कान्तिपुर वा नागरिकमा मेल गर्छु । लेख छापिए केहि भए पनि पैसा आउँछ, धेरै पाठकहरु हुन्छन् । त्यहाँ नछापिए मात्रै ब्लगमा राख्छु । डस्टविनको अर्थ काम नलाग्ने लेखहरु फाल्ने भन्ने अर्थमा मैले यसको नाम डस्टविन राखेकी हुँ । मेरो ब्लग दैनिक पत्रिकाहरुको डस्टविन हो ।
आफ्नो ब्लगमा कस्ता कुराहरु बढि राख्न रुचाउनुहुन्छ?
मलाई चिन्ने र मैले लेखोस् भन्ने मान्छेहरुले मलाई पढ्न चाहेका हुन्छन् । मैले लेखेका कुरा अरुले पढुन् भन्ने लागेका सबै कुरा म ब्लगमा राख्छु ।
७० को असाढ देखी मैले ब्लगिङ गर्न थालेकी हुँ । मेरा मित्र जोतारे धाइवाले मलाई यसमा सहयोग गर्नुभएको हो । किन गरेको भन्ने कुरा पनि रमाईलो छ । विचमा म दुईवर्ष मिडिया देखी टाढा भएँ । चिनेका मानिसहरु किन लेख्न छोडेको भनेर प्रश्न गर्थेँ । आफुले लेखेको पत्रिकामा पठायो छापिदिदैनन् । किन लेख्न छोडेको भन्ने मेरा पाठकहरुका लागि मैले ब्लगमा लेखेकी हुँ । खासमा म मेरो बिचार प्रवाहका लागि लेख्नेगर्छु ।
म सामाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारण होला, अहिले म समाजशास्त्रीले घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा लेख्छु ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन तर निरन्तर ब्लगिङ गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छ नि है !
मलाई अरुको बारेमा थाहा छैन । म एउटा लेखक हुँ । मेरा विचारहरु ब्लगमा आउलान् ।
रुचिको लिस्ट लामो छ । एउटा नर्मल र सचेत मानिसमा हुने सबै रुचि ममा छन् ।
नेपालमा ब्लगिङको प्रयोग कसरी भइरहेको पाउनुभएको छ?
कसले सदुपयोग गरेको छ, कसले दुरुपयोग गरेको छ भन्ने म को हुँ र ? आफुलाई मन लागेको विषयमा मनलागेको ब्लग पढे हुन्छ नि !
पढ्छु । फेसबुकमा लिंक भएका ब्लगहरु आफ्नो चासोका बिषयमा रहेछन् भने पढिन्छ । नामै भनेर त प्रकाश उज्यालो, जोतारे धाईवाको ब्लग, स्मृति ढुंगानाको ब्लग चाँहि सबै पढ्छु । धेरैजसो ब्लगको नाम याद हुँदैन ।
मलाई आचारसंहिताको कुरा थाहा छैन ।
ब्लग लेखनसँग जोडिएका कुनै सम्झनायोग्य प्रसंग भए बताइदिनुस न !
असारमा मैले ब्लग खोल्दा 'वाह ! भट्टचन सर' भन्ने लेख राखेकी थिए । लामो समयसम्म त्यसमा कसैले प्रतिक्रिया दिएनन् । अचानक फागुनमा त्यो लेखको यति धेरै प्रतिक्रिया आयो कि म छक्क परे । धेरै जसो जनजाती आन्दोलनमा भएका मानिसले मलाई उनीहरुसँगै राखेर कुरा गर्न थालेका छन् ।
तपाइ सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्विटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
फेसबुक र ट्विटर उत्तिखेरै हेर्‍यो, भुल्यो । छोटा छोटा विचार व्यक्त गर्न मिल्छ । ब्लगमा जत्ति लेखे पनि भयो । ब्लग एक प्रकारको संग्रह पनि हो । साहित्यिक रुपमा भन्दा, ट्विटर मुक्तक, फेसबुक कविता र ब्लग उपन्यास जस्तो लाग्छ ।
अब फेरि केलाई हक र हित भन्ने? आफु सम्बद्ध विषयमा लेखिएका छन् नि !
ब्लगिङलाइ केहीले नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै होला त?
हो भन्दा पनि हुन्छ । नागरिक पत्रकारिता भन्दा बरु नागरिक संचार भन्दा राम्रो होला । पत्रकारिता पेशा हो । संचार पेशा होईन ।
अब के भन्नु? धन्यवाद छ । यत्ति धेरै प्रश्न रहेछन् । कहाँ थपेर भन्नु?
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on May 8, 2014 at 11:22am
बधाई छ देवकोटा जीलाई । ब्लगको नामाकरण चाहिँ गतिलै रहेछ Dustbin !!!